Daafacii Bayern Munich Jerome Boateng oo sadex kulan la ganaaxay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Daafacii Bayern Munich Jerome Boateng oo sadex kulan la ganaaxay
Difaaca Bayern Munich Jerome Boateng ayaa lagu ganaacay in sadex kulan uusan dheeli karin Horyaalka Bundeliga kadib guduudkii tooska ahaa ee uu qaatay kulankii bar-bardhaca 1-1 ay la galeen habeenkii salaasada kooxda Schalke.
Difaaca xulka Germany ee kamid ahaa xidigihii soo qaaday World Cup ayaa kulanka laga saaray daqiiqadii 17th cayaartii Bundesliga ee Allianz Arena markaasoo uu jalaafaysi toos ah Schalke dhaiyaheeda Sidney Sam.
Eric Maxim Choupo-Moting ayaa qasaaiyey gool-kulaad loo dhigey xiligaasi,markii Manuel Neuer uu Bayern ka badbaadiyey halistaasi,waxayna kadib dhaliyeen gool uu madaxa ku saxiixay Arjen Robben daqiiqadii 67th laakiin shan daqiiqo kadib Benedikt Howedes ayaa ka dhigey 1-1.
war saxaafadeed ay soo saareen xiriirka Kubadda cagta ee germany (DFB) ayaa u qornaa “Gudiga aaadabta iyo anshaxa DFB waxay eegeen warbixintii gudiga tallo soo jeedinta ee DFB waxayna go’aansaeen kadib in FC Bayern Munich’ daafacooda Jerome Boateng laga ganaaxo inuu cayaaro sadex kulan oo Bundesliga.
Guuldaradii 4-1 ee Wolfsburg, ayaa kooxda Bayern kadhigeysa iney weli baadi goobayaan guushii ugu horeysay sanadka 2015 iyagoo uu kamaqan yahay Boateng, ayey sabtida aadayaan Stuttgart sidoo kale wuxuu maqnaanayaa kulamada Hamburg iyo Paderborn.